स्याङ्जामा कांग्रेसबाट बिजयी मेयरले रक्सीले मातेर लफडा गरेपछि युवाहरुले गरे रामधुलाई !(पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) – दैनिक खबर
November 17, 2018 Livenepal	Comment(0)
काठमाडौ । रारा तल घुम्न गएका स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिकाका मेयर शिवकुमार गिरी कालिकोटमा कुटिएका छन् । मेयर गिरी रारा भ्रमणबाट फर्किएर कालिकोटको होटलमा राति बास बसेका थिए । उनी कालिकोट सदरमुकाम मान्मास्थित सनलाइट होटेलमा बसेको बेला रक्सीले चुर हुनेगरी मातेको बुझिएको छ । मातेको अवस्थामा होटलमा बसेका काठमाडौँका युवाहरुको टोलीसँग पदको घमण्ड देखाएका कारण उनी कुटिएको स्थानीयले बताएका छ । त्यहाँ उक्त युवाहरु र मेयरबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवाद चुलिएपछि युवाहरुको टोलीले मेयर गिरीमाथि कुटपिट गरेका हुन् ।
‘मदक पदार्थ सेवन मेयरले आफ्नो पदको घमण्ड देखाउन थालेपछि विवाद भएको बुझिएको छ । ‘विवाद बढ्दै गएपछि मेयर र काठमाडौँको समूहबीच हात हालाहाल नै भयो प्रत्यक्षदर्शीले बताए । हात हालाहालमा मेयर गिरीसहित उक्त टोलीका अन्य ४ जान पनि घाइते भएको बताइएको छ। घाइते मेयर गिरीलाई राति नै जिल्ला अस्पताल कालिकोट लगिएको थियो। मेयर गिरीको टाउकोमा चोटलागेको र ४ वटा टाँका लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न काठमाडौँका ८ युवालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र मल्लले दुबै पक्ष मादक पदार्थ सेवन गरेर आक्रमणमा उत्रिएको बताए। उनले अहिले दुवै पक्षबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्रको गराउने कार्य सुरु भएको बताए। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका मेयर शिवकुमार गिरी नेपाली काँग्रेसबाट विजयी भएका हुन् उनले तत्कालिन नेकपा (एमाले)का प्रमुख पदका उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठलाई पराजित गरी विजयी भएका थिए । विजयी गिरीले पाँच हजार ९८९ मत प्राप्त गरेका थिए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी श्रेष्ठले पाँचहजार आठ मत प्राप्त गरेका थिए ।
निर्मला हत्या काण्डमा मुछिएका एसपी बिस्टका छोराले दिए बयान, कस्ता र कसको फोटो खिचेका थिए ? त्यो दिन खास यस्तो भएको रहेछ (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
निर्मला पन्तको हत्या भएको दिन साउन १० गते एसपी विष्टका छोरा किरण विष्टको जन्मदिनको पार्टी ओपेरा होटलमा थियो। जहाँ बम दिदीबहिनीसहित निर्मला पनि गएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, कञ्चनपुरका डिएसपी कृष्ण ओझाले ओपेरा होटलमा भएका सबै कार्यक्रमका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको तर अहिलेसम्म घटनासँग जोडिनसक्ने त्यस्तो कुनै पनि तथ्य फेला नपरेको स्पष्ट पारे। बम दिदी […]
सभापति देउवालाई पार्टी कार्यालयमै जान अबरोध, नेताहरु बीच धकेलाधकेल तनावग्रस्त बन्यो सानेपा (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
कांग्रेस कार्यालय सानेपामा तनावग्रस्त विद्यार्थी नेताहरुबीच धकेलाधकेल, सभापति देउवालाई पार्टी कार्यालयमै जान अबरोध(पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस)